AHOANA NY FOMBA HANOKAFANA RAKITRA RAR AO AMIN'NY WINDOWS 10 (2021) - MALEMY
Ny endrika fisie rakitra toy ny .zip, .rar, .7z, .tar, sns dia tena ilaina tokoa amin'ny fivezivezena sy fitahirizana. Ny rakitra marobe dia azo atambatra sy atambatra ao anaty rakitra iray ihany koa izay mitana toerana kely fitehirizana ambany kokoa ary manakana ny sahirana amin'ny fisintomana na ny fandefasana rakitra tsirairay. Na izany aza, tsy ny endrika fisie rakitra rehetra no manana fanohanana avy amin'ny Windows OS. Ny kinova Windows rehetra dia namoaka rakitra .zip fanohanana taorian'ny 1998, izany hoe tsy mila fangatahana antoko fahatelo ny olona iray ary afaka manindry indroa amin'ny rakitra .zip hijerena ny ao anatiny ary hamoaka azy ireo, saingy tsy mitovy amin'izany ny endrika fisie rakitra hafa.
Ireo mpampiasa Windows dia tsy afaka manokatra rakitra .rar mivantana ary mila fanampiana avy amin'ny antoko fahatelo. Soa ihany fa tototry ny fampiharana ny Internet izay manampy amin'ny fanokafana sy famoahana ny atin'ny .rar sy ny rakitra arsiva rehetra. Raha ilay loharano malalaka sy malalaka 7-zip dia aleon'ny ankamaroan'ny mpampiasa, safidy malaza hafa toa WinZip , WinRAR , PeaZip , sns, ampiasain'ny maro koa. Tranonkala maromaro no mamela ny mpampiasa hamoaka ny fisie .rar an-tserasera ary misintona ny atiny na manova ny rakitra .rar ho rakitra .zip, karazana rakitra tohanan'ny Windows OS. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hanome anao fitsangantsanganana an-tsokosoko amin'ireo rindranasa ireo izahay amin'izany ary hanampy anao amin'ny fanokafana rakitra .rar amin'ny solo-sainao Windows.
Ahoana ny fomba hanokafana rakitra RAR ao amin'ny Windows 10?
1. Mandrosoa ary mitsidika ny pejy fisintomana na iray amin'ireo fitaovana fanokafana .rar voalaza etsy ambony. Ny ankamaroan'izy ireo dia manana kinova roa misaraka ho an'ny rafitra 32 bit sy ny rafitra 64 bit. Sintomy ny rakitra .exe mety amin'ny rafitry ny rafitry ny rafitrao (File Explorer> Tsindrio havanana amin'ity PC ity ary safidio ny Properties hanamafisana ny karazana rafitrao). Hampiasa izahay 7-zip ho an'ity fampianarana ity fa ny fomba fampiasana fitaovana hafa .rar dia mitovy kokoa na tsy mitovy.
Fanamarihana: Afaka mampiasa ny mpampiasa mahazatra misintona & mametraka ny kinova maimaim-poana amin'ny iray amin'ireo fitaovana arisiva etsy ambony, raha toa kosa ireo mpampiasa mandroso izay maniry hampiasa ireo fitaovana ireo amin'ny famoretana ireo rakitra dia tokony handeha amin'ny lisitry ny endri-javatra, mampitaha ny tahan'ny famatrarana, sns alohan'ny fividianana sy fametrahana ireo kinova voaloa.
2. Raha vao misintona ilay rakitra .exe fitaovana ianao, tsindrio indroa eo aminy handefasana ny mpamosavy ary araho ny torolàlana eo amin'ny efijery hametrahana azy. Hamarino tsara fa apetrakao amin'ny toerany misy anao io rindranasa io.
3. Ankehitriny rehefa nametraka ilay rindrambaiko notakiana isika, dia afaka miroso mankany amin'ny fanokafana ilay rakitra .rar. Mitadiava ilay rakitra .rar, kitiho eo ankavanana ary safidio Sokafy amin'ny> zip-7 avy amin'ny menio manodidina. Raha mahita zip-7 amin'ny menu Open ianao dia tsindrio ny Misafidiana fampiharana hafa arahin'ny Fampiharana bebe kokoa ary mitadiava fampiharana hafa amin'ny PC . Mizotra mankany C: Program Files 7-Zip , safidio ny 7zFM.exe ary kitiho ny Open.
4. Hisokatra ny varavarankely 7-zip mampiseho ny atin'ny rakitra .rar sy metadata fanampiny hafa. Tsindrio eo hanesorana (Amin'ny alàlan'ny default dia alaina ny rakitra rehetra. Raha te hamboatra rakitra iray na roa fotsiny ianao dia safidio ny voalohany ary kitiho ny Extract), ary amin'ny varavarankely manaraka dia apetraho ny lalan'ny fitrandrahana.
5. Ny toerana misy anao default amin'ny fitrandrahana dia napetraka mitovy amin'ny toerana misy ankehitriny ny rakitra .rar. Ovao izany raha tianao ary tsindrio ok hanombohana ny fizotry ny fitrandrahana.
Fanamarihana: Misy rakitra .rar voaaro amin'ny teny miafina, ary angatahina ianao hiditra ao aminy mba hanokafana ilay rakitra na hamoahana ny ao anatiny.
Ny fotoana fitrandrahana dia miankina amin'ny isan'ny fisie, ny habeny, ary amin'ny specs PC anao ihany koa. Ny fitrandrahana rakitra .rar dia mety maharitra hatramin'ny roa segondra hatramin'ny minitra maromaro. Ary koa, tsy mila manokatra ny fisie RAR amin'ny zip-7 ianao amin'ny manaraka amin'ny tanana, satria ny fipihana indroa amin'ny fisie .rar dia hanokatra azy ho azy amin'ny fampiharana sahaza azy!
Manantena izahay fa nanampy ity lahatsoratra ity ary afaka ianareo sokafy ny fisie RAR ao amin'ny Windows 10 tsy misy olana. Raha mbola manana fanontaniana na tolo-kevitra ianao dia aza misalasala manantona amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra.
ny fomba hanatsarana ny google chrome
tsy tapaka mifandray amin'ny wifi windows 10 ny solosaina
tsy afaka nahavita fanavaozana ny fanafoanana ny fanovana windows 10
ny fomba fanamboarana ftp server windows 10